Ingabe inqubo ye-aluminium extrusion ingaguqulwa |
Ingabe inqubo ye-aluminium extrusion ingaguqulwa
I-Aluminium extrusion ngumshini ocibilikisa i-aluminium ezingeni lokushisa eliphezulu bese uwukhipha ube sesimweni esithile. Ukukhiqizwa kwe-aluminium extrusion kuyadingeka ukuthi kuphakame futhi isivinini se-extrusion sizinzile. Ekuguqulweni kokonga amandla kagesi wokubacindezela, i-aluminium extrusion nayo iyimodeli enezidingo eziphakeme. Ungakwenza kanjani kahle? Uma ingahlangabezani nezidingo, ingashintshwa yini?
Cubungula izakhi zokunaka
1. Ukulawulwa kwethempelesha: Ngokukhiqizwa kwe-extrusion, izinga lokushisa kwe-extrusion liyisisekelo senqubo eyisisekelo futhi esibucayi. Ukushisa kwe-extrusion kunethonya elikhulu kwikhwalithi yomkhiqizo, ukusebenza kahle kokukhiqiza, impilo yokufa nokusetshenziswa kwamandla.
2. Isivinini se-extrusion: Ijubane le-extrusion kumele lilawulwe ngokucophelela ngesikhathi senqubo yokukhipha. Isivinini se-extrusion sinethonya elibalulekile kumphumela oshisayo we-deformation, ukufana kwe-deformation, recrystallization nenqubo yesisombululo esiqinile, izakhiwo zemishini nekhwalithi yemikhiqizo ephezulu.
3. Ukucima Umshini: Ukucisha i-6063-T5 ukugcina i-Mg2Si eqinile encibilikisiwe ensimbi ye-matrix ekushiseni okuphezulu ngemuva kokuba imbobo yesikhunta ipholile ngokushesha ekamelweni lokushisa. Izinga lokupholisa livame ukulingana nokuqukethwe kwesigaba sokuqina. Ingxubevange engama-6063 ingaqiniswa ngezinga eliphansi lokupholisa elingu-38 ℃ / min, ngakho-ke ilungele ukucishwa komoya. Ukushintsha izinguquko zabalandeli nabalandeli kungashintsha amandla okupholisa futhi kwenze ukushisa komkhiqizo kwehle ngaphansi kwama-60 ℃ ngaphambi kokuthi kuqondane ukungezwani.
Aluminium extrusion ukuguqulwa
Ngokuthuthuka okusheshayo kwemboni ye-aluminium kanye nomncintiswano wemakethe oqhubeka uba nolaka, kuyisidingo esiphuthumayo sokwenza ngcono ukuncintisana kwemakethe yomkhiqizo ukunciphisa ukusetshenziswa komkhiqizo nokonga izindleko zokukhiqiza.
I-aluminium extruder ingaguqulwa ngohlelo lwe-servo. I-aluminium extruder ifakwe ipompo lokucindezela okuphezulu nepompo yengcindezi ephakathi. Izinhlobo ezimbili zemisebenzi zidinga ukucatshangelwa ngenkathi kuguqulwa, futhi amasethi amabili wezinhlelo ze-servo kufanele asekwe. Ukuguqulwa kudinga ochwepheshe abasebenza kakhulu, ngaphandle kwalokho umshini uzosebenza ungazinzi, amathuba emikhiqizo enesici akhuphuke kakhulu.
Ngenxa yemvelo uqobo lwayo, umphumela wokonga amandla we-aluminium extrusion awuphezulu kakhulu kwimishini eminingi, imvamisa kusilinganiso sokonga amandla esingu-15% -30%, kepha ukusebenza kahle kokukhiqiza kungakhuphuka ngo-5%, ku ngokujwayelekile, ukusebenza kahle kokonga amandla kuyabazeka.
Isikhathi Iposi: Nov-01-2020